တရုတ်နိုင်ငံ ဟဲပေပြည်နယ်က တရုတ်-လာအိုရထားလမ်းမှတစ်ဆင့် ပထမဆုံး ကုန်တင်ရထား စတင် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟဲပေပြည်နယ် ဝူဟန်မြို့ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအခြေစိုက်စခန်းမှ လာအိုနိုင်ငံ Prabang မြို့သို့ ထွက်ခွာမည့် ကုန်တင်ရထားတစ်စင်းအား မေ ၁၇ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဝူဟန် ၊ မေ ၁၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟဲပေပြည်နယ်၏ မြို့တော် ဝူဟန်မြို့မှ မေ ၁၇ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ကုန်တင်ရထားတစ်စီးသည် လာအိုနိုင်ငံ Prabang မြို့သို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး တရုတ်-လာအိုရထားလမ်းမှတစ်ဆင့် ပြေးဆွဲသည့် ဟဲပေပြည်နယ်၏ ပထမဆုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်တင်ရထား စတင်သည့် အမှတ်အသား ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။အဆိုပါရထားသည် ဓာတ်မြေဩဇာပစ္စည်းတန်ချိန် ၁,၆၅၀ တန် သယ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၇ ရက်မှ ၁၀ ရက်အတွင်း လာအိုနိုင်ငံ Prabang မြို့သို့ ရောက်ရှိရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ယင်းလမ်းကြောင်းသည် ဟဲပေပြည်နယ် နှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ၏ အဓိကမြို့ကြီးများအကြား ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကို တိုးချဲ့နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်း စီးပွားရေးကူးသန်းရောင်းဝယ်မှုများ နှင့် ပြည်သူအချင်းချင်း ဆက်ဆံဖလှယ်မှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
“လမ်းကြောင်း ဖွင့်လှစ်တာက ရထားလမ်းကနေတစ်ဆင့် ဒေသနှစ်ခုကြားမှာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန်ဟာ ယခင်အစဉ်အလာလမ်းကြောင်းအတိုင်း တင်ပို့တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ထက်ဝက်ကျော်သက်သာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် သတင်းကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်လည်း အများကြီး လျော့သွားမှာပါ ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလဲ ဒီလမ်းကြောင်းကနေတစ်ဆင့် ကုန်ပစ္စည်းတွေ ပိုပြီးတော့ တင်ပို့နိုင်ဖွယ် ရှိပါတယ်။”ဟု ဒေသတွင်း စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အထွေထွေမန်နေဂျာ Xiong Yunfeng က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
#China #Hubei #freight #train #တရုတ်နိုင်ငံ #ဟဲပေပြည်နယ် #ကုန်တင် #ရထား #ဆင်ဟွာ #xinhua #myanamar #xinhuamyanmar
WUHAN, May 17 (Xinhua) — A freight train departed Tuesday morning from Wuhan, the capital of central China’s Hubei Province, to Laos’ Luang Prabang, marking the launch of Hubei’s first international freight train that runs via the China-Laos Railway.
The train is loaded with 1,650 tonnes of fertilizer materials and scheduled to arrive in Luang Prabang in seven to ten days.
The route will expand the trade channel between Hubei and major cities of Southeast Asian countries and promote regional economic trade exchanges and people-to-people exchanges.
“The opening of the route is good news for enterprises as the transportation time between the two localities via the railway will save more than half compared with the traditional shipping mode. The logistics cost will also reduceagreat deal. Enterprises will likely ship more goods through this line,” said Xiong Yunfeng, the general manager ofalocal agricultural product company. ■
Photo – A freight train to Laos’ Luang Prabang departs fromalogistics base in Wuhan, central China’s Hubei Province, May 17, 2022. (Xinhua/Wang Xian)